မင်းမောင်လေး ညီမလေးတွေ ကျောင်းစားရိတ်လိုနေတာ
မင်းကိုယ်တိုင်အတွက် ရောင်းပန်းလှဖို့ ၊ စျေးကွက်ဝင်ဖို့
ပါတိတ် ၊ သရီးစတက် ၊ မီနီစကပ် ၊ နှုတ်ခမ်းနီ ပါးနီ ၊ အော်ဒီကလုံး
မင်းတို့က မပဋာဆိုရင် ကိုယ်လည်းပဲ မောင်ဒါသပါကွယ်။
Sorry ပဲ ညီမလေးရေ ...
မင်းရဲ့ ဘုရားပေး လယ်တပွဲ
နှမ်းပဲစိုက်စိုက် ၊ ဘူးပဲပျိုးပျိုး
နွေစပါး ၊ မိုးစပါးနဲ့ သီးထပ်သီးညှပ်
ဒါကိုတော့ မင်းလည်းသိတယ် ၊ ကိုယ်လည်းအသိပဲ။
မင်းဟာ နှုတ်မစောင့်သော လိပ်မလေး ဆိုပါတော့
မဲမှောင်နေတဲ့ မင်းရဲ့ မနက်ဖြန်လေးတွေကို
အရှက်သိက္ခာ တစ်ရွေးသားမျှှမရှိရှာတဲ့ လူ့ငနွားတွေ
ရေနစ်နေတဲ့ ကောက်ရိုးလေး မင်းကို
နိုကီရာ ၊ ဆိုနီအဲရစ်ဆင် ၊ ပင်နာဆိုးနစ်တို့နဲ့
တရားတော့ ရှိမှာမဟုတ်ဖူး ၊
မေတ္တာထားဖို့ တွေးခေါ်တတ်မယ်မထင်ဖူး ၊
(ဟေ့ ... ဟေး.... ဟောဒီမှာ မြန်မာဟေ့ ...)
အဲဒီလို မစားရ ဝခမန်း ကြွေးကြော်
လျှပ်ပေါ်လော်လီခဲ့တဲ့ သူတို့စာရိတ္ထတွေကို ထုတ်ကြွားကြတယ်။
ကိုယ့်အိမ်တောင် ကိုယ်မပြန်နိုင်သေးတဲ့ ကိုယ့်ဘဝအတွက်ရောပေါ့။
အရင်အချိန်တွေတုန်းက ကိုယ်တို့ပြောခဲ့တယ် (တစ်ဖက်နိုင်ငံတွေကိုပေါ့)
( ... ) နိုင်ငံ ဆိုပြီးတော့လေ ...။
ခုများ ကြည့်စမ်း ... မင်းတို့လေးတွေလေ ...
မဲဆောက်မှာ ၊ မယ်ဆိုင်မှာ ၊ ဘီကေကေမှာ ၊ ကြယ်ဂေါင်ရွှေလီမှာ
သတင်းတွေမှာ ဖတ်ရ၊ သတင်းတွေမှာ ကြားရတော့
မင်းတို့ကို ဘိုင်စကုပ်ထဲ ထည့်သေးတာပဲ ...အင်း ... .
ဖဦးထုပ်တွေ ၊ နငယ်တွေ ၊ ဘကုန်းတွေ
ဟေ့ ... အဲဒါ ဘီရုမာ ဟေ့ ...။ ဘီရုမာ ချယ်နယ်ဟေ့ ...။
တောက်! ဘယ်လောက် အသည်းနာဖို့ကောင်းလဲ
မိုးကျရွှေကိုယ် ၊ တိုလီမိုလီ ၊ အချစ်ဇာတ်လမ်း ၊ ပေါသွပ် ၊
ဒီကောင်တွေကို ဘယ်သူတွေက လင်ခ့်ပေးလိုက်တာလဲ
(ဟေ့ ... ဘီရုမာ ဘယ်စျေးလဲ) အဲဒီလိုများ အမေးခံရရင်လေ
မင်း အထင်ကြီးတဲ့ ကိုကိုတွေလည်း
ဗမာကားဟေ့ ... ဆိုတာနဲ့
လျှာတစ်သပ်သပ် ၊ ပါးစပ်တစ်ပြင်ပြင်
ဘာကိုမှ မလုပ်ချင် မကိုင်ချင်
နှုတ်ခမ်းတစ်လန် ပန်းတစ်လန် လက်ညှိုးငေါက်ငေါက်ထိုး
သူတို့ကရော ဘယ်လောက်များ သန့်စင်ကြလို့တုန်း
ဟေ့ ဒီမှာ ... ကိုယ်ပြောမယ် ညီမလေး
စျေးကွက်ဝယ်လိုအားကြောင့် ရောင်းကုန်ဆိုတာ ရှိနေတာ
သူတို့တွေ လောကအလှကို ဖျက်ဆီးနေတာ
သူတို့မို့ အရှက်မရှိ (ဘယ်ရှိပါ့မလဲ)
ဟိုတယ်တွေမှာ ကလပ်တွေမှာ နောက်ဆုံး ဖိုရမ်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ
မင်းရဲ့ လက်ကလေးတွေကို ပုခက်မလွှဲခင်
မာဆတ်က ကိုယ်ရွှေကိုယ်မျိူးတွေကို ပျော်တော်ဆက်ချေဦး
ရွှေအိုရောင်ညနေခင်းတွေမှာ မင်းဘဝကို ရောင်းစျေးတင်ပေါ့
တစ်ခါသုံးဆပ်ပြာ ၊ ငွေခြည်ရောင် ရေခဲသေတ္တာ
ညလယ်စာ မှာစားရင်း ဖြတ်ကျော်ဦးပေါ့။
အထည်ချုပ်တွေ ပိတ်တာ ...
ငွေနှစ်သောင်းအတွက် တိုက်ပွဲဝင်တာ ...
အရပ်ထဲမယ် ကိုယ်လေး ခေါင်းလေးတောင် လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် မလှုပ်ဝံံ့တာ
မင်းအပြစ်တွေချည်းပဲ မဟုတ်ပါဘူး ညီမလေးရယ်။
မင်းတို့လည်း မင်းတို့ နိုင်တဲ့ဝန် ထမ်းနေရတာ
အချိန်တန်ရင်တော့ သိုးမည်းအုပ်ကြီးထဲက ပြန်ထွက်ခဲ့ပါ ညီမလေးတို့ရယ်။
မင်းတို့ ကိုယ်စီ ဒုလ္လဘတစ်ခုစီရှိတယ်
မင်းတို့ဟာ ငှက်ကလေးတွေပေမယ့် မင်းတို့မှာ ဝမ်းရေးရှိတယ်
မင်းတို့မှာ ဘဝသစ်တွေ ရှိနေမယ်
နောက်ပြီးတော့ မင်းတို့ဟာ ...
Sorry ပါ ညီမလေးရယ် ...
တခုထဲပါပဲ ညီမလေးတို့ရယ် ...။
ကိုယ့်မျက်နှာ မင်းတို့မမြင်အောင် ငုံ့
ဘယ်သူမှ မကြားအောင် ဆုတောင်းပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
Sorry ပါ ညီမလေးတို့ရေ ...
မူရင်းလင့် - http://www.facebook.com/note.php?note_id=101507398691
Author Anonymous at 11:36:00 PM
သံုးခါေလာက္ ျပန္ဖက္မီတယ္ ဆရာေမာင္ေရ
ကဗ်ာေလးက အလြန္လွေပမယ္႔....သူတို႔ဘ၀ေလးေတြ အတြက္ ရင္နာတယ္။ဟုတ္တယ္...တခါတေလက်ေတာ႔ ျမန္မာမျဖစ္ခ်င္ဖူး။
ဒီကဗ်ာေလးက အမွန္အကန္ပဲဆိုတာကို က်ေနာ္ ေထာက္ခံပါတယ္ခင္ဗ်ာ..ဒီမွာ ဒီလိုပါပဲ..sorry ညီမေလး အမၾကီးတို ့ရာ....
if u have confidence by urself u must face all everytomorrow
there are no excuse that u are myanmar girl
if u believe and honest by urself whater u are wherere u are
u can survive that because of ur good reputation(thait kar)
there are no excuse that u are poor.u stay under bad country
so nyi ma lay.i am also sorry for ur weak excuse.
and i would like to show and tell u that there are no one who has no future no food no tomorrow if he/she is honest.do u know honest person is protected by GOD/good people/good luck
so nyi ma lay from now on leave ur old life dirty life and then walk under pure life/light there are so many friend waiting for u
and also Jesus said I am the way ,the truth and the life.
Jesus love u so much nyimalay and He will give uanew life which is shine upon all ur family ur friend ur brother ur all beloved ones and ur every tomorrow.GOD BLESS U (nyimalay)
မိမိရဲ႕ စိတ္ဆင္းရဲ စိတ္ခ်မ္းသာမႈကို ကိုယ္တိုင္ပဲ ရွာေဖြလို႔ရတယ္ အေမာင္ေရ။
အတိတ္ဘဝရဲ႕ ေကာင္းမႈကံ မေကာင္းမႈကံတို႔ကို ဘယ္သူကမွ အစားထိုးဝင္ခံလို႔ မရဘူးေပါ့ကြယ္။
ကၽြတ္ကၽြတ္... သိပ္ကို ေကာင္းတယ္အစ္ကို.. ကူးၿပီးသိမ္းထားလုိက္တယ္.။ အစ္ကို...။
ကဗ်ာေလးကိုအရမ္း ၾကိဳက္သြားၿပီ ေရးတဲ႕သူကို သိခ်င္လိုက္တာ
ျမန္မာအလင္း မွာထည္ရ၇မွာေနာ္ ဒါမ်ိဳးေတြ ေ၇ြႊမမ တိုမသိဘူး
မေလးအင္မီေဂ၇ွင္း ျဖတ္တာနဲ႔ ဒါေတြက အလိုလို ပါလာျပီးသားဆိုတာ
ဒီကိုလြ႔တ္က်မဲ႔ မိဘ ေတြကို ဖတ္ေစခ်င္ပါတယ္
ဒီလိုေစတနာမွန္နဲ႔ ကိုယ့္ညီမ၊ ကိုယ့္ေရႊမေလးေတြအေပၚ ကဗ်ာစပ္သူအစ္ကိုေရ ဆုေတာင္းတိုင္းသာ ၿပည့္ပါေစလို႔
ဆႏၵနဲ႔ဘ၀ ထပ္တူမက်တဲ့ သူတို႔ဘ၀ေတြအတြက္ စိတ္မေကာင္း
THIS IS A LESSON SOMEONE CAN LEARN WITHOUT HER OWN EXPERIENCE!
share လုပ္တဲ ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ..။
ေမာင္ေတာ္..ေမာင္ေတာ့ဆိုဒ္ကို အိတ္သြန္ဖာေမွာက္ လွန္ေလွာရွာေဖြၾကည့္ရႈရင္း ဒီစာပိုဒ္မွာ heart ထိသြားပါတယ္...။
အမ်ားသူငါ...အသိအျမင္ ဦးေႏွာက္ဗီတာမင္ တိုးပြားဖို ့အေရး ေ၇ွးရႈေတြးျပီး ႏွမေတာ္ေလးရဲ ့ဘေလာ့ဂ္မွာလဲ တင္ျပေတာ္မႈခ်င္ပါတယ္...ေမာင္ေတာ္ ခြင့္ျပဳေတာ ့။
သိပ္ကိုထိမိတဲ့ စာသားကဗ်ာေလးပဲ . . ရင္ထဲကိုစို.သြားတာပဲ
ၾဆာမားေရ . . ခင္ဗ်ားရဲ႕လက္က သိပ္ထက္ေၾကာင္း သိထားျပီးတာေတာင္ ဒီကဗ်ာမွာ ေၾကြက်သြားတယ္ ။
- ခင္ဗ်ားရဲ႕ ေယာ္ဘဲ မင္းလုလင္ -
မိန္းမတို႕ရဲ႕ဂုဏ္က်က္သေရ .....ေရႊေပးရင္ေတာင္မရဘူးဆို .....
စိတ္ေလးမိပါရဲ့ဗ်ာ ......အနာဂတ္မွာ ၿမန္မာမိန္းခေလး အပ်ိဳစစ္စစ္ဆိုတာ...ကတုံးေခါင္းမွာသန္းရွာသလိုမ်ားၿဖစ္ေနမလားဗ်ာ
အခုမွဘဲ ရွယ္သြားတယ္ ၃ခုလံုး မိုက္တယ္ဗ်ာ ကဗ်ာေတြက
ဒီလိုေစတနာမွန္နဲ႔ ကိုယ့္ညီမ၊ ကိုယ့္ေရႊမေလးေတြအေပၚ ကဗ်ာစပ္သူအစ္ကိုေရ ဆုေတာင္းတိုင္းသာ ၿပည့္ပါေစ
အတိတ္ဘဝရဲ႕ ေကာင္းမႈကံ မေကာင္းမႈကံတို႔ကို ဘယ္သူကမွ
ေျပာၾကည့္မယ္ေနာ္ ကၽြန္ေတာ္ အထင္ေျပာရရင္ေတာ့ ဗ်ာ ျမန္မာ မေလးေတြ ဒီလို ျဖစ္ေနတာကိုယ့္နိုင္ငံ ကေခါင္းေဆာင္ေတြ ညံ့လို႔ပဲလို႔ ထင္တယ္ ဗ်ာ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ျပည္တြင္းမွာပဲ မိန္းခေလးေတြ အတြက္ လံုေလာက္တဲ့လစာနဲ႔ အလုပ္ ေတြ ကိုေပးသင့္တယ္လို႔ထင္တယ္ ေလ
သူက ဒီလုိ ေနရသာ အဟုတ္ထင္ေနတာ
ေကာင္းတဲ ့သူက ဘယ္လုိဘဲျဖစ္ျဖစ္ ေကာင္းၾကတာဘဲဗ်ားးးးး